Kushandisa Google Scraping Tool Kuchengeta Dhidziro - Semalt Expert
A web scraper nzvimbo dzakagadziriswa, zvichibvumira vashandisi vese kugadzirisa ruzivo rwakagadziriswa kumashandisi anobatsira. Zvechokwadi, munhu anogona kuwana chero ruzivo rwaanoda pane webhu. Dambudziko nderokubudisa dare muzvikwata zvingashandiswa nyore nyore kana kuongororwa.
Google scraping chigadzi
Google Chrome chekuwedzera chinyorwa nde ( web scraping chishandiso chinoshanda pa Chrome browser. Nekuwedzera uku, haufaniri kubhadhara zviuru zvevabatsiri kunyopa-kuisa zvinhu kubva pawebhu mazuva ose - crilen skroutz kinita. Sarudza chinangwa-text uye rega Chrome chinyararire chekuwedzera kuita zvimwe.
Nhamba yakanaka yezvikwata zvevanhu vanoita kuti hurumende dzavo dzinopomerwa nekutsika-kutevera zvavanoshandisa. Chrome yakawandisa yakavabvumira kuti varwise kuve pachena uye kuzvidavirira kuburikidza nekuunganidza dhenda chaiyo pamusoro pehurumende mabasa. Kunyora data kubva pawebhu kunoshandisa nzira dzekushandisa kunogona kuva basa rakaoma. Itai kuti mushandirapamwe wenyu uite zvakanaka nekuisa iyi web scraper extension pane browser yako.
Ungaisa sei Chrome chinyorwa chekuwedzera?
Google chrome chekuwedzera chinyorwa inonyanya kuiswa web web scraping tool inopiwa pachena mu Chrome web store. Kuti uise ichi chinyararire pane browser yako, tanga "Wedzera ku Chrome" sarudzo yakaratidzwa kumusoro kwekona yekona ye Chrome yako browser. Pakangosungirirwa, chimbo chacho zvino chawanikwa pasi pechibvumirano chako cheMenu.
Ungashandisa sei Google Scraping tool?
Mamwe mabheji epahutaneti anogona kudhindwa kubva pawebhu kune maspredishiti anogona kushandiswa munguva yemberi. Zvisinei, kuwana dhiyabhorosi kubva kumawebsite akashandiswa muzvikwata zvinoshandiswa zvinoda mamwe maitiro. Muchidzidzo ichi, matafura neUnited States Securities and Exchange Commission (2015 fomu 20-F) ichashandiswa kuratidza kuti kufanirwa kweC Chrome kunotsvaga sei kubva pamapeji ewebhu uye masayiti.
Kubvisa tsvaga kubva kune dzimwe nzvimbo uchishandisa Google kugadzira zvishandiso, tsvaga peji yewebhu kuitira. Muchiitiko ichi, tarisa pamatafura. Sarudza mitsara inofanira kuiswa uye chengetedza chinyorwa chekutsvaga pakona yepamusoro yekona ye browser yako uye sarudza "Scrape yakafanana. "
Chrome Scraper Extension ichatumira data yakatsvairwa muhwindo idzva. Wakatapudza wako achaonawo mazita emakoloni etafura yakabviswa. Chengeta deta yakagadziriswa kuti uite nechokwadi kuti yakanyatsobudiswa. Dzvanya "Kopa kubhokisi" uye wozarura Microsoft yako Excel. Nyora data munhare yako yepadheseti nekudhonza "Ctrl + V. "
Usati waongorora ruzivo rwepaspiritsi yako, siya madonhesi emusoro panzvimbo dzavo dzakarurama. Bvisa mapurisa asina chinhu pane yako Microsoft Excel kuti uwane data chaiye. Shandisa sumse yeSex basa kuti uone kuti mari yekubhadhara pane pepa yako yakarurama.
chekushandisa cheGoogle chekucheka chinokonzera kuti kuunganidza deta kuve nyore kupfurikidza uye kunyatsojeka. The Scraper inowedzera web data extraction kukwana uye kubudirira kukupa iwe dzimwe sarudzo yekupfuura-kuongorora tsika dzako. Shandisa zvakataurwa pamusoro apa-zvinokurukurwa kuti zvikuvadze hurumende mapeji uye uwane ruzivo rwechokwadi rwekutaura pachena.